एमाले महाधिवेशन : न्यौपानेद्रारा केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
एमाले महाधिवेशन : न्यौपानेद्रारा केन्द्रिय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा
सफल न्युज द्वारा २०७८ मंसिर ९ गते बिहीबार ११:०७ मा प्रकाशित
पोखरा,मंसिर ९ गते । नेकपा एमालेकी नेतृ भगवती न्यौपानेले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी दिने हुनुभएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहनुभएकी न्यौपानेले चितवनमा सम्पन्न हुन गईरहेको पार्टीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महिला कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा उठ्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
हाल एमाले तनहुँको जिल्ला सचिव र अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रिय सदस्य रहनु भएको नेतृ न्यौपाने वि.सं. २०५१ सालमा नेकपा एमालेको सदस्यता प्राप्त गरेर २०५६ सालबाट निरन्तर नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीमा विभिन्न पदको जिम्मेवारीमा रहँदै आउनु भएको छ।
विद्यार्थी आन्दोलनबाट उदाउँदै अनेरास्ववियुको राष्ट्रिय परिषद सदस्य बन्नुभएको उहाँले अनेमसंघ तनहुँको दुई कार्यकालसम्म अध्यक्षको रुपमा काम गरिसक्नु भएको छ । न्यौपाने २०६२ ⁄ ६३ जनआन्दोलनको चर्चित पात्रसमेत हुनुहुन्छ।
तनहुँ क्षेत्र नं १ मा नेकपा एमालेबाट निर्वाचित सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेकपा एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि र एमालेमा लामो समयसम्म पृष्ठभुमी बनाएका नेताहरु प्रतापलाल श्रेष्ठ, शंकरनारायण श्रेष्ठ, विद्या ढकाल लगायत नेताहरु नेकपा एसमा लागेर कार्यकर्ताहरुलाई आफूतिर तानातान गरिरहेको अवस्थामा नेतृ न्यौपानेले ती कार्यकर्तालाई जोगाउने मात्र नभई पार्टीको पक्षमा दृढताका साथ उभिन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु भएको छ ।
उहाँले राष्ट्रिय सभामा सांसदको रुपमा रहेर देश र जनताको पक्षमा पनि सशक्त आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ। “उहाँ पार्टीको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएमा तनहुँमा कार्यकर्ताको संरक्षण गर्ने र विपक्षीसँग पनि बैचारिक बहसले अडिग रहँदै केन्द्रबाट समेत भरोसा गर्नसक्ने सशक्त नेता पाउने आशामा कार्यकर्ताहरु रहेका छन् ” राष्ट्रिय युवा संघका केन्द्रिय सचिवालय प्रदीप तिम्सिना बताउनुहुन्छ ।
एमालेले यस दशौं महाधिवेशनमा ३३ प्रतिशत महिला केन्द्रीय सदस्य ग्यारेन्टी गरेको हुँदा न्यौपाने केन्द्रीय सदस्य बन्नेमा ढुक्क छन् । एमालेको आसन्न महाविधेशन यही मङ्सिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ । महाधिवेशनको मङ्सिर १० गते नारायणी नदी किनारमा उद्घाटन हुनेछ भने ११ र १२ गते सौराहाको सेभेन स्टारमा बन्दसत्र हुनेछ ।
महाधिवेशनमा देशभरिबाट एक हजार ९९९ प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् भने १०६ सदस्य मनोनित गरिएको छ । महाधिवेशनमा एमालेले पाँच लाख जनता सहभागी गराउने बताउँदै आएको छ । महाधिवेशनले १५ केन्द्रीय पदाधिकारीसहित २२५ केन्द्रीय कमिटी सदस्य र लेखा आयोग तथा अनुशासन आयोगमा १५/१५ जना निर्वाचित गर्नेछ ।